Ifa ngoNovemba, nguGuillermo Galván. Buyekeza | Izincwadi Zamanje
Ufe ngoNovemba, nguGuillermo Galván. Buyekeza
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 25/10/2021 12:00 | Abalobi, Amabhuku, Inoveli emnyama
Kufa ngonovemba inoveli yokugcina ka UGuillermo Galvan. Emakethe kusukela ngosuku lokugcina lwe-13, kuyindaba yesithathu edlala izinkanyezi umphenyi UCarlos lombardi, ngemuva Isikhathi sokugunda y Intombi Engcwele amathambo. Futhi ngokuqinisekile kuzoba nokuningi ngoba uGalván uthole a ifomula enhle lapho ihlanganisa isakhiwo esithakazelisayo, isilungiselelo esihle kakhulu nezinhlamvu eziqinile. Eyami lena ukubuyekezwa.
1 UGuillermo Galvan
2 Kufa ngonovemba
3 ILombardi neMadrid yangemva kwempi
Umbhali waseValencian kanye nentatheli ngomsebenzi omude wokubhala nokuqashelwa ngabagxeki nabafundi, kufanele abe neziqu zezikweletu ngendlela ehlukile Butterfly Shadows: I-Epic kaLeovigildo, iNkosi yamaVisigoths, Ngaphambi kokuthi ngivalelise kuwe, Kusukela emlotheni, Ukubuka kukaSaturn, Umoya awushiyi mkhondo o Ngibize ngoJudas. Ngo-2019 waqala lokho manje osekuwuchungechunge lwamanoveli ama-3 anenkanyezi owayeyiphoyisa kanye nomphenyi uCarlos Lombardi, amlethele impumelelo enkulu.
Ngafika ku UGuillermo Galvan ngibonga umngane, onginike isampula Intombi Engcwele amathambo. Kodwa njengoba ngivamise ukuqala uchungechunge ekuqaleni, ngalibamba Isikhathi sokugunda. Umphumela: lokho Ngibambeke kulowoMadrid kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-40 ichazwe kahle ngezinhlamvu ezichazwe kahle, zombili ezinkulu nezesekondari, ngesakhiwo esihle kakhulu.
Manje, ngemfashini yokulebula yonke into, lolu hlobo oluncane lubizwa ubushiqela blackokungukuthi, amanoveli anetulo lamaphoyisa aseJalimane lamaNazi (njengelikaBernie Gunther, UPhilip Kerr), iSoviet Union (Arkady Renko, of UMartin Cruz Smith) noma, endabeni yaseGalván, iSpain kaFranco ngemva kwempi.
En Intombi Engcwele amathambo U-Galván udlulisele isenzo edolobheni, ikakhulukazi i-Aranda de Duero, ethuthukisa enye ilebula yalolu hlobo, ye-noir yasemaphandleni. Futhi waqhubeka nokugcina ibha engayehli kule ndaba entsha.
Sise- IMadrid eneminyaka engama-42, Igcwele i-WWII eYurophu kanye nemvelo engavamile, emnyama neswele yangemva kwempi lapha. KANYE UCarlos lombardi, owayeyiphoyisa futhi manje osebenza e-Hermes detective agency, uhileleke ekuphenyweni kwamacala amabili angenabo ubudlelwano obubonakalayo: lelo ukunyamalala kwesakhamuzi saseJalimane kanye nokutholakala kwesidumbu sika intombazane egwilize.
Ngesikhathi esifanayo, sazi okwengeziwe ngawe umlando womuntu siqu, ngesiqalo lapho owayengumkakhe u-Begoña ebonakala ecacisa isimo abazithola bekuso. Zisekhona laphaya iqembu elisebenzayo nelithembekile wabasebenzisanayo nomphathi wabo nomngani Balbino Ulloa.
Futhi kuleyo Madrid of more grey kunokukhanya akukho ukuntula kusukela I-Gestapo, lo AbwehrAma-intelligence agents aseBrithani ngisho nalawo e- Pinkerton I-U.S. Uyajoyina usomabhizinisi othize abavela ezindaweni eziphakeme kakhulu, kanye nomsekeli we-Lombardi, ozoveza ulwazi lomuntu siqu oluningi olufanele njengoba luthunaza umseshi. Futhi zonke ziqondana endaweni lapho zihlangana khona ubufebe, cinema, imakethe emnyama nobunhloli, kodwa isiphetho sakhe singesincane kakhulu.
ILombardi neMadrid yangemva kwempi
Ngoba bonke abanye ngosondonzima abagqamayo kule noveli. I-Lombardi, ngoba isizinda sayo sigcwele ukuthukuthela nokuzithiba ngesikhathi esifanayo ngaphambi kwesimo sezwe kanye nokuphila okungaphezu kwempunga ye-Madrid ehlushwa imiphumela ngemva kwempi yombango.
Udangele kodwa wasinda ngokusemandleni akhe ibhalansi enzima phakathi kwesikhathi sakhe esidlule ngemva kwesikhathi sakhe ejele kanye nomkhathizwe obonakala uvuleka ekupheleni kwenoveli. Futhi kunjalo amehlo akhe asikhombisa ukuthi Madrid, esimweni esihle kakhulu lokho u-Galván akudala kabusha, kucace nakakhulu ngenxa yokulandisa okukhona manje okuhlala kusondeza isenzo nezithombe ndawonye. Ukufaneleka okudlula ngisho nalabo bethu abangazwelani nalokho okwamanje okulandisayo isisonga nge ukuphathwa okumangalisayo nolimi.
Una umlando wokuncibilika lokho kuxuba ngobuciko izinhlobo zamaphoyisa, ezomlando nezobunhloli. Futhi ngokuqinisekile kuzoba nokuningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Ufe ngoNovemba, nguGuillermo Galván. Buyekeza
U-Ana Maria Matute